हार्ले डेभिडसनलाई चुनौती देला त यो कम्पनीले ? | Automotive News Nepal
हार्ले डेभिडसनलाई चुनौती देला त यो कम्पनीले ? ९ भदौ, २०७५
ठूलो लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको स्टार्ट अप कम्पनी अभन्तुरा चोपर्सले भारतमा १६०० सीसी सेगमेन्टको बाइकमा ५० प्रतिशत बजार ओगट्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कम्पनीले यो सेगमेन्टमा अमेरिकी कम्पनी हार्ले डेभिडसनलाई चुनौती दिने अनुमान गरिएको छ ।
चोपर क्लासको शुरुवात क्यालिफोर्नियाबाट भएको हो । यो बाइकमा एउटा ठूलो इन्जिन हुन्छ । सिट भन्दा ह्यान्डलबार अलि माथि भएको यो बाइकमा लामो फ्रन्ट फोर्क हुन्छ ।
अभन्तुराले नै बेंगलुरुमा आफ्नो दुई प्रोडक्ट रुद्रा र प्रवेगालाई बेच्न शुरु गरिसकेको छ । यी बाइकमा २००० सीसी इन्जिन जडान गरिएको छ र मुल्य २१ लाख भन्दा पनि बढी छ । आउँदो एक वर्ष भित्रमा कम्पनीले २ सय ५० मोटरसाइकल बेच्ने लक्ष्य राखेको छ ।
भारत विश्वकै लागि सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइकलको बजार भए पनि हार्ले डेभिडसन र अभन्तुरा जस्ता कम्पनीका बाइकहरुको लागि भारतमा पनि सिमित मात्रामा ग्राहकवर्ग छन् ।
वितेको एक वर्षमा भारतले १६०० सीसी इन्जिन भएको कुल ५ सय ३९ बाइक बेचेको थियो । यसमा ५ सय ३४ युनिट हार्ले डेभिडसन बाइक सामेल थिए । यो सेगमेन्टमा सन् २०१६ मा ५ सय ८४, सन् २०१७ मा ५ सय ७४ र सन् २०१८ मा ५ सय ३९ युनिट बाइक बिक्री भएका थिए ।
अभन्तुरा यो सेगमेन्टलाई लिएर सकारात्मक देखिन्छ । कम्पनीले दशै–तिहारको अवसरमा हैदरावाद र दिल्ली साथै वर्षको अन्त्यतिर पुर्व र पश्चिममा आफ्नो डिलरसीप खोल्ने योजना बनाइरहेको छ ।
अभन्तुराको फाउन्डिङ पार्टनर अमिताभ विशवासले अहिलेसम्मको कम्पनीको प्रगतिमा आफूहरु खुसी भएको बताएका छन् । आफूहरुले मास ब्रान्ड बेच्न नचाहने र आउदो समयमा अरु ४–५ प्रकारका मोडलहरु बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु ९.६३ प्रतिशत बढे
काठमाडौं - विश्वभर हवाई यात्रुको संख्यामा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नेपालको भने...
भाग्यमानी बन्यो टिकट नम्बर ०२४८४०, पायो यूएम रेनेगेड मोटरसाइकल
काठमाडौं – नाडा अटो शोमा लक्की ड्रका आधारमा प्रदान गरिने यूएमको रेनेगेड कमान्डो...
२४ लाख भारु मूल्यको होन्डाको नयाँ बाइक अफ्रिका ट्विन लन्च भयो भारतमा
होन्डाले नयाँ बाइक २०२० अफ्रिका ट्विन एड्भेन्चर बाइक लन्च गरेको छ । भारतमा सो बा...